भोलि देखि निस्कासन हुदै करोडौको आइपियो , कति दिने आवेदन ? ⋆ afno sansar
भोलि देखि निस्कासन हुदै करोडौको आइपियो , कति दिने आवेदन ?
प्रकासित : १० असार २०७८, बिहीबार ०३:१८
नेपालमा अहिले हित ग्राहि खाता खोल्नेको संख्या ४० लाख हाराहारी पुग्न लागिसकेको छ ।
नयाँ लगानी कर्ताहरुको आकर्षणको रुपमा प्रथामिक शेयर समेत रहेको छ । यसै विच जीवन विकास लघुवित्तलले असार ११ गते शुक्रबारबाट प्राथमिक साधारण शेयर सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।
१० असार २०७८, बिहीबार ०३:१८